स्पर्श सुख कसरी हुन्छ ? | Sambad Media
स्पर्श सुख कसरी हुन्छ ?
दुःखमा परेका बेला कसैले पिठ्युँमा यसो सुमसुम्याउँद, सुखमै रहेका बेला खुसी बाँड्न कसैले गाला मुसार्दा वा आलिङ्गनबद्ध गर्दा नरमाउने मान्छे को होला र रु मानिस मात्र होइन, जनावरहरु पनि रमाउँछन् कसैले स्पर्श गर्दा ।
तर, त्यस्तो किन हुन्छ त रु कसैले सहानुभूति दर्साउन वा प्रेम प्रकट गर्न स्पर्श गर्दा हामीलाई सुखानुभूति के कारणले हुन्छ रु यो सबैको जिज्ञासा हो । तपाईको पनि हुन सक्छ । त्यसो भए अब कारण स्पष्ट भइसकेको छ ।
यसको कारण वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । मानिस वा जनावरको छालामा विशेष प्रकारका संवेदनशील कोषिका हुन्छन् । कसैले स्पर्श गर्दा ती कोषिकाले प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछन् ।
स्पर्श आनन्द मानिस र जनावर दुवैले उठाउने गरे पनि यसको कारण भने थाहा थिएन । मानिसको छाला सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो । यसले सुमसुम्याई, सुखद्, स्पर्श, चिमोटाई, काटेको, डढेकोजस्तो स्पर्शमा फरक छुट्याउछ ।
क्यालिफोर्निया इष्न्टिच्युट अफ टेक्नोलजीका अनुसन्धानकर्ताहरुले मुसामा परीक्षण गरेपछि उपयुक्त तथ्य पत्ता लगाएका हुन् । उनीहरुका अनुसार, छालामा भएका विशेष प्रकारका संवेदनशील न्युरोनले सुमसुम्याउँदा प्रतिक्रिया दिने गर्दछन् ।
अनुसन्धानकर्ता डेभिड एनरसन भन्छन्, हामीलाई ती न्युरोनका बारेमा धेरै जानकारी छ, जसले चोटले चोट वा दुखाई अनुभव गर्दछन् । तर, यसअघिसम्म सुखद अनुभव दिने न्युरोनहरुका बारेमा जानकारी थिएन । एजेन्सी